Posted by pandora at 1:17 AM
ဝေး....... လာဖတ်သွားပြီ၊ အကြွေးကို အတိုးနဲ့တကွ ထိုက်ထိုက် တန်တန် ပေးဆပ်တဲ့ မပန်ကို ပို ချစ်သွားပြီ၊ မပန် ရေးထား တာတွေ ဖတ်ရတာ တကယ့် ငယ်ဘ၀ကို ပြန်ရောက် သွားသလိုပဲ၊ လေပြေလဲ အသက် တနှစ်ကျော်ပဲကွာတဲ့ အကိုနဲ့ ဆော့ရတာတွေ မပန်နဲ့ မပန် အကို ဆော့သလိုမျု်ိးပဲ၊ ဇတ်ထောင် တာတော့ မပါဘူး၊ နတ်ပူးတိုင်း ဆော့တာ တော့ ပါတယ်၊ ကျေးဇူးတင်တယ်တော် မပန်၊
"အပြင်ကို ငေးကြည့်လိုက်တော့ သစ်ရွက်တွေပေါ်က သွယ်တန်းကျနေတဲ့ မိုးရေစီးကြောင်းတွေကို လေရူးက အပိုင်းပိုင်း ဖြတ်တောက်လို့ ဟိုလွင့်ဒီလွင့်။"
မပန်ရေးထားတာကို ဖတ်ပြီး ငယ်ငယ်က ဆော့ခဲ့တာ မျက်စိထဲ ပြန်မြင်လာတယ်.. အများဆုံးဆော့ဖြစ်တာက ဈေးရောင်းတန်းရယ် အရုပ်မ လုပ်ပြီး ဆော့တာပါပဲ.. တူတူပုန်းတမ်းလည်း ဆော့တယ်.. :D
ကစားနည်းတွေက စုံလို့ပါလား ...
မမေလဲ လာကစားသွားတယ် နော် ... :)
“စိမ်းရွက်နုပေါ်က ပေါက်ဖတ်များ” ပေါ့ဗျာ။ အစိမ်းလိုက် ကိုက်ခဲပြီး အချိန်တန်တော့ ၀ဲပျံသွားကြတာပဲလေ။
ဒီလို စာမျိုးလေးတွေမဖတ်ရတာ ကြာပေါ့။ ငယ်ဘ၀ကို ပြန်သတိရမိသဗျာ။
အဖေလို အမေလို ချစ်အားပိုခဲ့တယ်။
ဘယ်နှယ့်လဲ မကောင်းဘူးလား။ ကျနော့်ကဗျာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆရာ လူမျိုးနော်ရဲ့ ၀တ္ထုတို တပုဒ်ထဲက (နှလုံးသားနှင့်တွေးခေါ်၍ ဦးနှောက်ဖြင့် ခံစားခြင်း ၀တ္ထုထဲက) ကဗျာပါ။ ပန်ဒိုရာက ငယ်စဉ်ဘ၀ရေးထားတာဖတ်ရလို့ ပြေးသတိရမိသွားတာလေးပါ။ အဆုံးပုဒ်ကို မမှတ်မိတော့လို့ ကွက်လပ်ချန်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။ သိချင် ၀ယ်ဖတ်...တကျပ်...တကျပ်.....
ချစ်လေပြေ ကျေနပ်ရင် ပျော်ပါတယ်နော်။
ကို၊မ စန္ဒာလှိုင် လာလည်တာကျေးဇူး. ကဗျာက တခါတလေ ဆန်သွားတာပဲ။
မနုစံ။ ဟုတ်တယ် တူတူပုန်းလည်း ကစားတယ်
မမေ။ လာကစားသွားတာ ကျေးဇူး။
ကိုမေတ္တာ ပေါက်ဖတ်မလုပ်ပါနဲ့ အသည်းယားတယ်။
ကိုစေးထူး. ဟုတ်တယ် ငယ်ဘ၀က လွမ်းစရာနော်။
ကိုပေါရေ.. ကဗျာအတွက် ကျေးဇူး. မဖတ်ဖူးဘူး။ တန်းလန်းတော့ မထားခဲ့နဲ့လေ။ လိုက်တောင်းမှာပဲ။
ကဗျာ အဆုံးပိုဒ်ကလေးအတွက် ကျေးဇူးပါ ကိုပေါရေ